China Wall Tende Mini Wood Chitofu Nemipendero Yemakumbo Mugadziri uye mutengesi | Ndarama yegoridhe
Mini Wood Chitofu Tsananguro
Yedu yeWall Tent Mini Wood Chitofu Nemakumbo Akapetwa chakanakira kudziisa nekubika munzvimbo diki senge tende teni 12x12, tepees, yurts, masaki, dzimba diki nezvimwe. Chitofu chehuni chakagadzirwa chakagadzirwa nesimbi isina chinhu isingaite 304 inodzivirira ngura uye ngura. Superior Dhizaini iyo griddle ndiro yakagara pamusoro inokupa yakasimba uye yakapusa yekubikira pamusoro. Inogadzirira yekubika yakakura yekubika kumusoro uye musuwo damper inogadzira mini huni chitofu nyore kudzora kupisa kwekubika mabasa epamba. Moto kabati muzasi kuchengetedza hwaro kubva pakupisa.
Chitofu chehuni chepamusoro chealuminium kupisa simbi hachigone kupera mushure mekudziya kwekushandisa kwenguva refu. 1 chitofu chemuviri, 6pcs mapaipi esimbi isina chinhu, 1pc simbi isina chinhu yemoto inosunga, 2 mativi racks, 1pc kabati, 1pc madota anotsvaira. Iyi diki diki yekupisira huni haina zvikamu zvakasununguka uye inogona kuiswa nekukurumidza. Chitofu chidiki chehuni chiri nyore kwazvo kutakura neruoko kana kutakura mumotokari yako. Iyo tende yehuni chitofu yakagadzirirwa nyika yekunze kunyangwe iwe uri musasa, kudziya kwetende, kuvhima, hove, kubika, bhaira mvura, nezvimwe.
Mini Wood Chitofu Ruzivo
Zvirongwa Zvekuwedzera: Zvekuwedzera zvekushandisa zvekubika, tinokurudzira spark arrestor, flue damper, tangi remvura, kitini chinopenya uye bonde risingadziviri moto. Izvi zvishandiso zvinokubatsira kuburitsa flue gasi, zvinokuita kuti ubve padambudziko remweya weflue, kudzivirira marashi kuputika, zvichikonzera njodzi dzekuchengetedza uye kuve yakanakisa yekunyungudika chando nechando chemvura yekunwa, uye kana chitofu chiri kupisa zvakanaka tangi rinobika mvura mumaminetsi nekuda kwenzvimbo yaro kuseri kwetopopop uye hwaro hwepombi flue panopisa kupisa.
Mini Wood Chitofu Mufananidzo
Pashure: Stainless Simbi Wood Masitovu Ekubika
Zvadaro: Inotakurika Simbi isina Simbi Yekambi NeGirazi
Kupeta Tende Chitofu
Kupeta Danda Rinopisa Chitofu
Hot Tende Chitofu
mini huni chitofu
Masvingo eTende Masvingo
Kunze Kwehuni Kunopisa, Stainless simbi chitofu, Tende Wood Inopisa Chitofu, Camping Stove Mvura Tangi, Bindu Kubika Chitofu, Musasa Wood Burner,